Wararkii ugu dambeeyay Dagaalka Degmada Beled Xaawo & Ciidamada DF oo… - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada Wararkii ugu dambeeyay Dagaalka Degmada Beled Xaawo & Ciidamada DF oo…
Wararkii ugu dambeeyay Dagaalka Degmada Beled Xaawo & Ciidamada DF oo…
Faah faahin ayaa ka soo baxaya dagaalkii saaka ka dhacay Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, kaasoo daba socdo weerar ay xalay degmadaasi ku qaadeen Ciidamada Maamulka Jubbaland.
Ciidanka Kumaandooska Gorgor ayaa door weyn ku qaatay tallaabada ay Ciidamada Dowladda ku difaaceen gacan ku haynta degmadaasi. Ciidanka Gorgor ayaa Ciidamada Jubbaland ku khasbay inay dib ugu laabtaan gudaha Mandhera, marka laga reebo tirada yar ee lagu hareereeyay Dhismaha Salaam Bank.
Ilo wareedyo ayaa Warbaahinta u sheegay in Ciidanka Gorgor ku sugan yihiin meel aan sidaasi uga fogayn, halkii madaafiicda goobta ay Kenyanku ka soo ridayeen.
Sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ciidamada Jubbaland ay abaabul ka wadaan dhanka wadada ka timaada Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Dhanka kale waxaa isa soo taraya khasaaraha dagaalka ka soo kala gaaray labada dhinac iyo weliba dadka rayidka, iyadoo dhimashada labada dhinac ay illaa toban sii caga cageynayso.
Sidoo kale shan carruur ah oo wada dhalatay ayaa ku dhintay madfac saaka ku dhacay hoygooda oo ku yaala Beled Xaawo. Aabaha dhalay carruurtan waxaa lagu magacaabaa Cabdiweli Turmaag.
Si kastaba ha-ahaatee dagaalkan ugu dambeeyay ee ka dhacay Degmada Beled Xaawo ayaa lagu sheegay mid ka mida dagaaladii ugu qaraaraa ee degmadaasi ka dhacay.